လှဦေးတိုကျ၊ လှညျးဦးတိုကျအိမျတို့အညံ့ ကငျးအောငျလုပျနညျးနှငျ့ အိမျထောငျဦးစီး နနေံ့အလိုကျ မလှညျ့အပျသော အိမျတို့ အရပျ - Khitalin Media
July 3, 2020 Khitalin Media အထွေထွေဗဟုသုတ 0
လမ်းဦးတိုက် လှည်းဦးတိုက်အိမ်တွေမှာ နေတဲ့သူတွေဟာ အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ အခိုက်အညံ့ဒဏ်ကို ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ လမ်းဦးတိုက်အိမ်ဆိုတာ က လမ်းတည့်တည့်ကြီးမှာ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကို ဆိုလိုတာပါ။
ဆိုးကျိုးတွေ အနေနဲ့ကတော့ အဲ့ဒီအိမ်မှာ နေနေသမျှ ကာလပတ်လုံး စီးပွါးရေး ကျဆင်းလာခြင်း လုပ်သလောက် အရာမထင်ခြင်း သားတကွဲ မယားတကွဲဖြစ်ခြင်း
အမှုအခင်း ပြဿနာဖြစ်ခြင်း ကျန်းမာရေး ချုချာလာပြီး အိမ်သူ အိမ်သားတွေမှာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမပြတ်သွားလာနေရခြင်း စသော ဆိုးကျိုးတွေ တစ်ခုပြီး ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ရှေးထုံးစဉ်လာ ရိုးရာဗေဒင်အနေနဲ့ကတော့ အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကို မနေသင့် မနေအပ်တဲ့ အိမ်လို့ ပြောကြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အိမ်မျိုးမှာ မဖြစ်မနေ နေထိုင်မိပြီဆိုရင်တော့ အခုဆရာပြောတဲ့ လုပ်နည်း ကိုင်နည်းတွေ စီရင်ပြီး အညံ့တွေကို ချေဖျက်ထားလိုက်ပါ။
လမ်းဦးတိုက်မှာအိမ်ဆောက်ထားမိရင် ကာကွယ်ချေဖျက်ဖို့က အိမ်တံခါးမကြီးကို လမ်းနဲ့ တည့်တည့်နေရာကနေ လွှဲပေးလိုက်ပါ။ဒီနည်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းကလည်း အိမ်တံခါးရဲ့ အပေါ်မှာ ၆လက်မအရွယ်မှန်ဝိုင်းလေးတစ်ချပ်ကို ချိတ်ဆွဲလိုက်ပါ။
မှန်အလယ်မှာ မာကင်ပင်အနီနဲ့ စတုရန်းကွက်ဆွဲထားပြီး ချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါ။နောက်တစ်နည်းကလည်း အုတ်တံတိုင်းမြင့်မြင့် ကာထားတာမျိုး၊အိမ်ရှေ့ ခြံဝင်းထဲမှာ ရေပန်းတစ်ခု ချိတ်ဆွဲထားတာမျိုးကလည်း အညံ့တွေကို ပြေပျောက်စေပါတယ်။
လမ်းဦးတိုက် အိမ်မှာ နေတဲ့လူတွေ အမြန်ဆုံး စီးပွါးဖြစ်ထွန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စတိုးဆိုင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ကုန်စုံဆိုငိဖွင့်ထားနိုင်ရင် အမြန်ဆုံးစီးပွါးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တချက်ကလည်း ရုပ်ရှင်ရုံ ဗီဒီယိုရုံ အရက်ဆိုင် ဘီယာဆိုင် k .t .v ပျော်ပွဲစားရုံ စတဲ့စီးပွါးရေးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ရင်လည်း အထူးကောင်းပါတယ်။
အထက်ကပြောခဲ့တာတွေ တစ်ခုမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမှာက သင်နေတဲ့ လမ်းဦးတိုက် အိမ်ရှေ့မှာ ရေအိုးစင်လေးတော့ တည်ပေးလိုက်ပါဗျာ။အိမ်ရဲ့ အညံ့လေးတွေ လွတ်သွားအောင်လို့ပါ။
ဪတစ်ခုလောက် ထပ်ပြောဦးမယ်။မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေအတွက်ပါ။
အိမ်ထောင်ဦးစီးဟာ တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင် တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ပါဘူး။ဘုမ္မိအရပ်မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ကျန်းမာရေး စီးပွါးရေး လူမှုရေးကစလို့ အစစအရာရာ ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းကွက်မရှိပါဘူး။
ဘာယတြာမှလည်း လုပ်မနေပါနဲ့။အဲ့ဒီအိမ်ကနေ အမြန်ဆုံးပြောင်းပါလို့ပဲ အကြံပြုပါရစေ။
တနင်္လာသားသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်တော့ အနောက်တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ဘူး။မနေအပ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်ဆုံးသာ ပြောင်းပါတော့။
အင်္ဂါသားသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်တော့ အနောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ဘူး။မနေအပ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်ဆုံးသာ ပြောင်းပါတော့။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်တော့ အနောက်မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ဘူး။မနေအပ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်ဆုံးသာ ပြောင်းပါတော့။
ကြာသပတေးသားသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်တော့ အရှေ့မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ဘူး။မနေအပ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်ဆုံးသာ ပြောင်းပါတော့။
သောကြာသားသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်တော့ အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ဘူး။မနေအပ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်ဆုံးသာ ပြောင်းပါတော့။
စနေသားသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုရင်တော့ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေသင့်ဘူး။မနေအိပ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်ဆုံးသာ ပြောင်းပါတော့။
ထူးအောင်လှိုင် ရွှေတိဂုံတောင်ဘက်မုခ် 09451662991
တစ်ချို့သောယုံကြည်မှုအရလှေဦးတိုက် လှည်းဦးတိုက် လမ်းဦးတိုက်အိမ်မှမဟုတ်ပါဘူး ထောင့်ကျတဲ့နေရာက အိမ်တွေလည်း ခိုက်တတ်ပါတယ်တဲ့။ကဲဘယ်လိုမျိုးလေးကာကွယ်ကြမလဲ?
(၂) ဆောက်ပြီးသားအိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုလည်း လမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး မှန်လေးတစ်ချပ်ချိတ်ထားပေးပါ။
(၃) တရုတ်လောကီအယူအဆတွေအရ လမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး ကျားခေါင်းပုံတစ်ပုံချိတ်ဆွဲထားပေးပါ။
လမျးဦးတိုကျ လှညျးဦးတိုကျအိမျတှမှော နတေဲ့သူတှဟော အဲ့ဒီအိမျရဲ့ အခိုကျအညံ့ဒဏျကို ခံရလရှေိ့ပါတယျ။ လမျးဦးတိုကျအိမျဆိုတာ က လမျးတညျ့တညျ့ကွီးမှာ ဆောကျထားတဲ့ အိမျကို ဆိုလိုတာပါ။
ဆိုးကြိုးတှေ အနနေဲ့ကတော့ အဲ့ဒီအိမျမှာ နနေသေမြှ ကာလပတျလုံး စီးပှါးရေး ကဆြငျးလာခွငျး လုပျသလောကျ အရာမထငျခွငျး သားတကှဲ မယားတကှဲဖွဈခွငျး
အမှုအခငျး ပွဿနာဖွဈခွငျး ကနျြးမာရေး ခြုခြာလာပွီး အိမျသူ အိမျသားတှမှော ဆေးရုံ ဆေးခနျးမပွတျသှားလာနရေခွငျး စသော ဆိုးကြိုးတှေ တဈခုပွီး ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။
မွနျမာ့ရှေးထုံးစဉျလာ ရိုးရာဗဒေငျအနနေဲ့ကတော့ အဲ့ဒီအိမျမြိုးကို မနသေငျ့ မနအေပျတဲ့ အိမျလို့ ပွောကွလရှေိ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီလို အိမျမြိုးမှာ မဖွဈမနေ နထေိုငျမိပွီဆိုရငျတော့ အခုဆရာပွောတဲ့ လုပျနညျး ကိုငျနညျးတှေ စီရငျပွီး အညံ့တှကေို ခဖြေကျြထားလိုကျပါ။
လမျးဦးတိုကျမှာအိမျဆောကျထားမိရငျ ကာကှယျခဖြေကျြဖို့က အိမျတံခါးမကွီးကို လမျးနဲ့ တညျ့တညျ့နရောကနေ လှဲပေးလိုကျပါ။ဒီနညျးထကျပိုကောငျးတဲ့နညျးကလညျး အိမျတံခါးရဲ့ အပျေါမှာ ၆လကျမအရှယျမှနျဝိုငျးလေးတဈခပျြကို ခြိတျဆှဲလိုကျပါ။
မှနျအလယျမှာ မာကငျပငျအနီနဲ့ စတုရနျးကှကျဆှဲထားပွီး ခြိတျဆှဲထားလိုကျပါ။နောကျတဈနညျးကလညျး အုတျတံတိုငျးမွငျ့မွငျ့ ကာထားတာမြိုး၊အိမျရှေ့ ခွံဝငျးထဲမှာ ရပေနျးတဈခု ခြိတျဆှဲထားတာမြိုးကလညျး အညံ့တှကေို ပွပြေောကျစပေါတယျ။
လမျးဦးတိုကျ အိမျမှာ နတေဲ့လူတှေ အမွနျဆုံး စီးပှါးဖွဈထှနျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ စတိုးဆိုငျ လကျဘကျရညျဆိုငျ ကုနျစုံဆိုငိဖှငျ့ထားနိုငျရငျ အမွနျဆုံးစီးပှါးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
နောကျတခကျြကလညျး ရုပျရှငျရုံ ဗီဒီယိုရုံ အရကျဆိုငျ ဘီယာဆိုငျ k .t .v ပြျောပှဲစားရုံ စတဲ့စီးပှါးရေးတှေ လုပျဆောငျနိုငျရငျလညျး အထူးကောငျးပါတယျ။
အထကျကပွောခဲ့တာတှေ တဈခုမှ မလုပျနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ မဖွဈမနလေုပျပေးရမှာက သငျနတေဲ့ လမျးဦးတိုကျ အိမျရှမှေ့ာ ရအေိုးစငျလေးတော့ တညျပေးလိုကျပါဗြာ။အိမျရဲ့ အညံ့လေးတှေ လှတျသှားအောငျလို့ပါ။
ဪတဈခုလောကျ ထပျပွောဦးမယျ။မွနျမာနိုငျငံက အိမျထောငျဦးစီးတှအေတှကျပါ။
အိမျထောငျဦးစီးဟာ တနင်ျဂနှသေားသမီးဆိုရငျ တောငျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ပါဘူး။ဘုမ်မိအရပျမကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျဖွဈလို့ပါပဲ။ ကနျြးမာရေး စီးပှါးရေး လူမှုရေးကစလို့ အစစအရာရာ ဘာတဈခုမှ ကောငျးကှကျမရှိပါဘူး။
ဘာယတွာမှလညျး လုပျမနပေါနဲ့။အဲ့ဒီအိမျကနေ အမွနျဆုံးပွောငျးပါလို့ပဲ အကွံပွုပါရစေ။
တနင်ျလာသားသမီး အိမျထောငျဦးစီးဆိုရငျတော့ အနောကျတောငျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ဘူး။မနအေပျပါဘူးဗြာ။အမွနျဆုံးသာ ပွောငျးပါတော့။
အင်ျဂါသားသမီး အိမျထောငျဦးစီးဆိုရငျတော့ အနောကျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ဘူး။မနအေပျပါဘူးဗြာ။အမွနျဆုံးသာ ပွောငျးပါတော့။
ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီး အိမျထောငျဦးစီးဆိုရငျတော့ အနောကျမွောကျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ဘူး။မနအေပျပါဘူးဗြာ။အမွနျဆုံးသာ ပွောငျးပါတော့။
ကွာသပတေးသားသမီး အိမျထောငျဦးစီးဆိုရငျတော့ အရှမွေ့ောကျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ဘူး။မနအေပျပါဘူးဗြာ။အမွနျဆုံးသာ ပွောငျးပါတော့။
သောကွာသားသမီး အိမျထောငျဦးစီးဆိုရငျတော့ အရှတေ့ောငျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ဘူး။မနအေပျပါဘူးဗြာ။အမွနျဆုံးသာ ပွောငျးပါတော့။
စနသေားသမီး အိမျထောငျဦးစီးဆိုရငျတော့ မွောကျအရပျကို မကျြနှာမူထားတဲ့ အိမျမှာ မနသေငျ့ဘူး။မနအေိပျပါဘူးဗြာ။အမွနျဆုံးသာ ပွောငျးပါတော့။
ထူးအောငျလှိုငျ ရှတေိဂုံတောငျဘကျမုချ 09451662991
တဈခြို့သောယုံကွညျမှုအရလှဦေးတိုကျ လှညျးဦးတိုကျ လမျးဦးတိုကျအိမျမှမဟုတျပါဘူး ထောငျ့ကတြဲ့နရောက အိမျတှလေညျး ခိုကျတတျပါတယျတဲ့။ကဲဘယျလိုမြိုးလေးကာကှယျကွမလဲ?
(၂) ဆောကျပွီးသားအိမျဖွဈမယျဆိုလညျး လမျးဘကျကိုလှညျ့ပွီး မှနျလေးတဈခပျြခြိတျထားပေးပါ။
(၃) တရုတျလောကီအယူအဆတှအေရ လမျးဘကျကိုလှညျ့ပွီး ကြားခေါငျးပုံတဈပုံခြိတျဆှဲထားပေးပါ။